Vol. 12 DECEMBER, 1910. No. 3
KA BIXIYO maskaxda bini-aadamka waxaa laga dhoofiyaa dabiiciyan iyo dadaal la'aan iyadoo loo maleynayo meel mustaqbal ah ama xaalad farxad leh. Fikradda ayaa si kala duwan loo muujiyay. Ingiriisi waxaa lagu muujiyey qaabka erayga jannada.
Nasaarada laga helo xabaalaha iyo meelaha aasida ee dadka deggan reer Ohio ee ka markhaati kacaya inay u malaynayaan jannada. Munaasabado, macbadyo iyo qoraalo ku saabsan biraha iyo dhagaxa ee burburinta ilbaxnimada qadiimiga ah ee Ameerika waxay muujinayaan caqiidada jannada, oo ay ku dhisteen dhismayaashii dhaqameedyada. Nimanka dhulkii Niil waxay kor u qaadeen ceelal, harraamyo iyo xabaalo, oo ka tagay iyaga oo ah aamusnaan, markhaatiyaal caan ah oo soo bandhigay xaalad nololeed oo mustaqbalka farxad u ah nin. Jinsiyada Aasiya waxay bixiyaan xayawaan badan oo ku jira godadka iyo meelaha aasaasiga ah, iyo suugaanta oo sharraxaysa sharaxaadda mustaqbalka farxad ahaaneed ee qofka sida natiijooyinka wanaagiisa ee dhulka. Ka hor intaan cirfiidyada diinta masiixiga ah lagu sara kiciyo carrada Europe, wareegyada dhagaxyada iyo tiirarka iyo caqiidada ayaa waxaa loo adeegsaday nin si loogu abuuro barakooyinka samada isaga oo jooga isaga oo jooga dhulka, iyo inuu ku haboonaado inuu galo cirqiga farxada leh ee jannada ka dib dhimasho. Marka loo eego asal ama jaangooyo, ama si sahlan ama xayiraad dhaqameed, jinsiyad kastaa waxay muujisay aaminsanaanta xaalad mustaqbalka ee jannada.
Jinsiyad kastaa waxay leedahay fikradaha iyo halyeeyada kuwaas oo u sheegaya sida ay u gaar ah meel ama xaalad aan dambi lahayn, taasoo tartanka ku noolaa si farxad leh. Xaaladdan asalka ahi waxay ku jirtaa jiritaanka heer sare oo ay ku eegeen cabsi ama cabsi ama cabsi iyo ciddii ay u arkeen in ay yihiin sayidkooda, garsoorka ama aabe ahaan, oo leh aaminaadda carruurta. Xisaabyadani waxay sheegayaan in shuruucda ay bixiyeen abuuraha ama ka sarreeya, si ay ugu noolaadaan sidan oo kale, tartanka waa in ay sii wadaan inay ku noolaadaan xaalad ah farxad sahlan, laakiin natiijooyinka culus waxay ka soo baxayaan wixii ka baxsan noloshiisa. Sheeko kastaa waxay u sheegeysaa sida ay u adagtahay jinsiyadda ama aadanaha, ka dibna dhibaatooyinka, nacaybka, iyo musiibooyinka, iyagoo xanaaqooda iyo murugadooda ay ka dhalatay jaahilnimada iyo caasinimada awoowayaasha.
Kharribaadda iyo halyeeyada iyo Qorniinka ayaa sheegaya in jinsiyadaha bani-aadmiga ahi ay ku nool yihiin dembi iyo murugo, ay ku dhufteen cuduro iyo la dhibto da 'weyn oo dhiman, sababtoo ah dembigii hore ee awoowayaasha. Laakiin rikoor kasta oo u gaar ah, iyo dabeecad ahaan dadka ka mid ah, kuwaas oo la sameeyey, kuwa horay loo soo sheegey markii ay ufududaynayaan abuuraha ama soo noqoshada khaladka ah, ragga ayaa ka baxsan doona riyada dhabta ah ee nolosha dhulka iyo galaan meel ka timaada xanuunka iyo xanuunada, cudurada iyo dhimashada ayaa ka maqan, iyo meel kasta oo soo gashay waxay ku noolaan doontaa farxad aan kala go 'lahayn oo aan la dagin. Kanu waa ballankii samada.
Khudbada iyo halyeeyga ayaa u sheega oo qoraagu tilmaamayaa sida ninku u noolaan lahaa iyo waxa uu samayn doono ka hor inta uusan helin ama isaga siin karin fecility samada. Suurtogal u ah nolosha iyo dabeecaddiisa jinsiyadiisa, nin ayaa loo sheegaa in uu jannada ku heli doono raalli ahaanshaha ama uu ku kasbado by xooga xoogga dagaalka, by ka adkaata cadowga, by adkaada kuwa nacasnimada, nolol sooman, kalsoonida, iimaanka salaadda ama xadhigga, falalka sadaqada, isaga oo xakameynaya dhibaatooyinka dadka kale, is-xakamayn iyo nolol adeeg, faham iyo guuldaro iyo xakamaynta cuntooyinka aan habooneyn, dabciga iyo niyadda, fekerka saxda ah, ficil sax ah iyo Aqoonta, iyo in samadu ay ka baxsan tahay ama ka sarrayso dhulka ama waa inay dhulka ku jirtaa xaalad mustaqbalka ah.
Rumaysadka Masiixiga ah ee ku saabsan qofka horey iyo gadaal mustaqbalka waa uu ka duwan yahay kuwa ka mid ah diimaha kale ee kale. Sida laga soo xigtay nin baray Masiixi wuxuu ku dhashay kuna noolaa dembi, waxaana la sheegayaa in ciqaabta dembiga uu yahay dhimasho, laakiin waxa laga yaabaa inuu ka baxsado dhimashada iyo ciqaabta kale ee dembiga isagoo rumaysanaya Wiilka Ilaah oo ah Badbaadiyihiisa.
Erayada Axdiga Cusub ee ku saabsan jannada waa run iyo qurux. Baybalka fiqi ahaaneed ee ku saabsan jannada fiqi ahaaneed waa cufnaanta murugada, is burinaya iyo cillado gaaban. Waxay maskaxda ka leexiyaan oo dareenka dareemaan. Jannada fiqi ahaaneed waa meel iftiin leh nalal dhalaalaya, oo si fudud loo qurxiyo oo lagu qurxiyo waxyaabo aad u qaali ah dhulka; meel ay heeso ammaan ah ku heesayaan si joogta ah si ay u noqdaan muusikada muusikada; halkaas oo waddooyinka ay ku socdaan caanaha iyo malabka iyo halka cuntada cuntadu ku badato; meeshii hawada la gashay oo udgoonaysa cadar cadcad iyo foox udgoon; halkaas oo farxad iyo raaxo ay ka soo horjeedaan taabasho kasta iyo meesha maxaabiista ama maskaxda ee ragga ay heesaan oo cayaaraan oo ay ku raaxaystaan ​​oo ay ku raaxaystaan ​​hosannas ee salaadda iyo ammaan, daa'in ah weligeed ah.
Yaa doonaya sida jannada? Nin muxuu ka fikiray inuu aqbalo cillad sidaas oo kale ah, ciriiri ah, samada haddii ay isaga ku ridayaan? Nafta ninku waa inuu ahaado sida nacas, kalluun jilicsan ama hooyo, si ay ula jaanqaadaan wax kasta oo qalad ah. Qofna ma rabo jannada fiqi ahaaneed ee hadda jira iyo midna aan ka yarayn fiqiga, oo ku wacdiya. Waxa uu doonayaa inuu halkan ku sii jiro halkan dunidan la soo dhoobo halkii uu ka tagi lahaa samada sharafta leh ee uu qorsheeyay, oo uu dhisay oo uu ku jiray samada fog.
Waa maxay samada? Miyuu jiraa ama ma jiraa? Haddii aysan sidaas ahayn, markaa sababta wakhti luminaysa in qofku is-qabsado oo uu is-qabqabsi-la'aan yahay? Haddii ay jiran tahay oo ay mudan tahay, markaa waxa ugu wanaagsan in qofku fahmo oo u shaqeeyo.
Maskaxdu waxay ku faantaa farxad waxayna u muuqataa meel ama dawlad meel farxad la heli karo. Meeshan ama dawlad-goboleed waxaa lagu muujiyey ereyga jannada. Xaqiiqada ah in dhammaan jinsiyada aadanuhu ay marwalba ka fikiraan oo ay rumaysteen nooc ka mid ah samada, xaqiiqda ah in dhammaantood ay sii wadi doonaan inay ka fekeraan oo ay sugaan samada, waxay caddaynaysaa in ay jiraan wax maskaxda ku haya fikradda, iyo in arrintan ay tahay in ay la mid tahay caynkaas, taas oo ujeedkeedu yahay, iyo in ay sii wadi doonto in lagu hago oo hogaamiyo fekerka ku aaddan ujeedadeeda illaa laga gaaro hadafka ku habboon ee la gaaro oo la ogaado.
Waxaa jira tamar aad u weyn oo feker ah. Iyagoo fekeraya oo isha ku haynaya samada ka dib geeridii, mid ka mid ah wuxuu kaydiyaa xoog xoog leh wuxuuna dhistaa sida ku haboon. Awoodgan waa in ay leedahay muuqaalkeeda. Nolosha caadiga ah ee dunidu wax fursad ah uma laha suurtogalnimada. Ujeedooyinka noocaas ah iyo rabitaankooda waxay helayaan muujintooda ka dib dhimashadii dunida jannada.
Maskaxdu waa shisheeye ka soo jeeda meel farxad leh, dunida maskaxda, meesha murugada, dagaalka iyo jirrada aan la aqoon. Imaanshada xeebaha duniga muuqaalka leh, booqdaha ayaa ah mid xiran, loola cararayo, oo ay kufsadeen waxyaalihii hore, khiyaano iyo khiyaano qaababka iyo midabada iyo dareenka. Wuxuu illoobaa xaaladdiisa farxadeed oo uu raadsado farxad iyada oo la dareemayo dareenka sheyga ee dareenka, wuxuu ku dadaalaa oo uu ku dhibtoonaa kadibna wuxuu ku dhibtoonaa inuu helo soo dhoweynta walxaha, ee aan farxad lahayn. Ka dib markii uu deganaansho iyo khilaaf, isku dhac, guul iyo niyadjab, ka dib markii uu xannuun ka yimid xanuunka oo uu ku raaxaysto farxad sare leh, booqdaha wuxuu ka tagaa adduunka jireed wuxuuna ku noqdaa wadankiisa hooyo ee farxad leh, isaga oo la qabsaday khibrad.
Miyirku mar kale wuu yimaadaa, kuna noolyahay, kana tagaa adduunka jireed, si uu u gaaro, dunida maskaxda. Maskaxdu waxay noqotaa socdaal wakhti dheer leh oo marar badan soo booqday, waligiisna ma uusan maqlin dhererka mana xaliyo dhibaatooyinka nolosha madaniga ah. Man wuxuu leeyahay waayo-aragnimo badan oo faa'iido yar. Wuxuu ka yimaadaa gurigiisa weligiis ah inuu ku qaato maalin adduunka ah, ka dibna mar kale wuu dhaafaa si uu u nasto, oo kaliya inuu mar kale yimaado. Tanu way ku socon doontaa ilaa uu ogaado nafsaddiisa, kii badbaadin doona, kii xayawaanka duurjoogta xiirta, oo kan sharka lehna wuu ku dumin doonaa, oo wuxuu ku hoggaamin doonaa jidadka baqdinta badan oo ku wareegsan dhulka cidhiidhiga ah iyo guska dhexdiisa. meesha uu isagu iskiisa u yaqaano, oo aan laga badin dareenka oo aan ku dhicin hanjabaad ama jahwareer oo aan loo soo bandhigin natiijooyinka ficilka. Ilaa uu ogaado badbaadintiisa oo uu yaqaano runtii nin amaan ah ayaa sugi kara samada, laakiin ma ogaan doono mana geli doono jannada marka uu u imaanayo si uusan u garanaynin dunida jismi ahaaneed.
Maskaxdu ma helin waxyaalaha muhiimka ah ee jannada, oo waligeedna marnaba xitaa waqti gaaban oo ku habboon oo ku salaysan hareeraheeda, iyo dareenkiisa iyo dareemada iyo dareemayaasha. Ilaa intu maanka ku hayo aqoonta iyo sayidkoodu dhammaanba, ma garan karo cirka sare ee dhulka. Sidaa daraadeed maskaxda waa in laga sii daayaa dhimashada duniga jirka, si ay ugu soo gasho xaalad farxad ah sida abaal-marinteeda, si ay ugu noolaato fikradaha ay u muuqatay, oo laga xorreeyay dhibaatooyinkii ay ku jirtay, dareenka ay la kulmeen, iyo in ay ku raaxaystaan ​​falalka wanaagsan ee ay sameeyeen iyo ururka midaysan ee uu ujeedkiisu yahay.
Dhimashada ka dib ma aha dhammaan ragga. Ragga ra'yigooda iyo shaqadooda lagu kharash gareeyo nolosha jirka, kuwaas oo marnaba tixgelin ama ka welwelin arrimo ku saabsan gobolka mustaqbalka kaddib dhimasho, oo aan ujeedo lahayn oo ka soo jeeda jimicsi jireed ama shaqo, oo aan lahayn fikrado ama ujeedo xagga ilaahnimada ka baxsan ama naftaada dhexdooda, raggaani ma yeelan doonaan samada ka dib geeridii. Qaar ka mid ah maskaxda kuxiran fasalka, laakiin kuwa aan cadowga ahayn ee aadanaha, waxay ku jiraan xaalad dhexe sida hurdo qoto dheer, illaa inta jidhka jirka ah diyaar u ah oo diyaar u ah; markaa waxay gashadaan markay ku dhashaan kuwan oo ay ku sii socdaan noloshooda iyo shaqada sida ay u dalbadeen noloshooda hore.
Si loo galo jannada, waa in uu ka fikiro oo samee waxa samada. Jannada looma dhicin dhimasho. Jannada looma dhaqmin dareenka maskaxeed, adoo waxba ka qaban, adoo dhibaateeya, wakhti wakhti dhaaf ah, ama si raaxo leh u riyoodaan markaad soo jeedo, iyo ujeedo la'aan. Jannada waxaa sameeya iyada oo la fekerayo qof naftiisa iyo kuwa kale 'badbaadada ruuxiga ah iyo dabeecadda ah waxaana lagu kasbaday shaqadii ugu fiicnayd ilaa dhammaadka noocan oo kale ah. Mid baa ka farxiya samada qudhiisa oo keliya, oo isna wuu dhisay, samada mid kale ma aha samadiisa.
Ka dib dhimashadeeda jireed jirka, maskaxdu waxay bilaabmaysaa habka wax laga tirtiro taas oo ah baahida guud iyo kuwa dareenka ah, ficilada, roonaanta, iyo cunto yaryar oo la gubo ama la riixo. Kuwani waa waxyaabo ay neceb yihiin oo ay khiyaaneeyeen oo ay khiyaaneeyeen oo ay jahwareeriyeen ayna ku wareeriyeen oo ay sababeen xanuunka iyo silica inta ay ku sugneyd nolasha jireed taas oo ka hor istaagtay in la ogaado farxad dhab ah. Waxyaabahan waa in la dhigaa oo laga dhigaa si ay maskaxdu u hesho nasasho iyo farxad, waxaana laga yaabaa in ay ku noolaato fikradaha ay u baahatay, laakiin aan awoodin inay ku guuleystaan ​​noloshooda jirka.
Jannada waa sida ugu muhiimsan ee maskaxda ugu badan sida hurdo iyo nasasho jidhka. Marka dhammaan arimaha dareenka iyo fikradaha laga saaro oo ay maskaxda ku dhamaystaan, waxay markaas galaysaa samada oo ay hore u diyaarisay nafteeda.
Jannada ka dib dhimashada looma sheegi karo meel gaar ah ama meel dhulka ku taal. Dunida la ogsoon yahay ee ku jirta nolosha jidhka looma arki karo mana dareemayso jannada. Jannada kuma koobna cabbirada dhulka loo qiyaaso.
Mid ka mid ah kuwa soo galaya jannada ma xukumi karo sharciyada xukuma dhaqdhaqaaqyada iyo falalka jirdhiska jirka ee dhulka. Kan jannada ku jira ma socdaan, isna wuu duulaa, oo mindhaa wuu isla tashanayaa. Ma ka qayb galo cuntooyinka raashinka leh, mana cabbaan dheriga macaan. Ma maqlo ama soo saaro muusikada ama dhawaaqa qalabka xargaha, alwaax ama qalabka. Isagu ma arko dhagaxyada, dhirta, biyaha, guryaha, dharka, sida ay ku jiraan dhulka, mana muuqan qaababka jireed iyo sifooyinka kuwa ku jira dhulka. Irdaha jilicsan, jidadka jasiiradaha, cuntooyinka macaan, cabitaanka, daruuraha, carshooyinka cad cad, haros iyo keruubbo ayaa laga yaabaa inay ku yaalliin dhulka, laguma helin jannada. Ka dib dhimasho kasta mid kasta wuxuu dhistaa samadiisa isaga oo u dhaqma sida wakiilkiisa. Ma jiraan wax iibsasho iyo iibin badeecad ama mid ka mid ah alaabta dhulka, maadaama aan loo baahnayn. Macaamil ganacsi laguma qaadin samada. Dhammaan ganacsiga waa in laga qaybgalaa dhulka. Bandhigyada Acrobatic iyo bandhigyo cajiib ah, haddii la arkay, waa in lagu arko dhulka. Ma jiro wax la mid ah kuwa soo bandhigay maaraynta jannada, mana jiro cid xiiseynaysa bandhigyadaas. Ma jiraan wax xayawaan siyaasadeed oo jannada ah, maadaama aysan jirin jagooyin la buuxinayo. Ma jiraan wax diin ama diin ah oo jannada ah, iyada oo mid waliba uu kaniisadkiisa ka tagay. Sidoo kale ma heli doono muraayadaha iyo bulsho gaar ah, sababtoo ah dhirbaaxada, silsiladaha iyo quraaradaha bulshada ee dharka la dhigo laguma oggolaan karo samada, geedaha qoyska laguma beddeli karo. Xayawaanka iyo xirmooyinka iyo dhammaan qurxinta noocaan oo kale ah waa in la soo saaro ka hor inta aan la galin jannada, waayo jannada oo dhan waa sida oo kale iyo waxaa laga yaabaa in loo yaqaano sida ay yihiin, iyada oo aan khiyaano iyo khiyaanada been ah.
Ka dib markii jidhka jidhka la dhigo, maskaxda ku jirta jidhku wuxuu bilaabmaa inuu iska tuuro oo iska xoroobo guntimaha jidhka. Marka ay illowdo oo ay noqoto mid aan la socon, maskaxdu waxay si tartiib tartiib ah u toosisaa oo waxay galeysaa adduunka jannada. Muhiimadda samada waa farxad iyo fikir. Waxna la dhigin oo ka hortagi kara ama faragelin kara farxad. Wax khilaaf ah ama caro nooc kasta ha galaan jannada. Nidaamka farxada, adduunka jiilka, maaha mid aad u weyn, cabsigelin leh ama aad u sareeya si ay maskaxdiisu u aragto mid aan muuqan ama meel ka baxsan. Mana aha jannada si aan kala sooc lahayn, caadiga ah, aan la iloobi karin ama mid la mid ah si loogu ogolaado in maskaxda loo tixgeliyo sidii ay ka sarreeyeen oo aaney ku dhicin gobolka. Jannada waa maskaxda galaysa, wax kasta oo maskaxda ku haya (ma ahan dareenada) farxad weyn oo ugu weyn.
Badbaadada jannada waxay ku jirtaa fikirka. Fikirkan waa abuuraha iyo mucjisada iyo dhismaha samada. Sahayda fekerka iyo diyaarinta dhammaan ballamada samada. Fikradda ayaa qirtay dhammaan kuwa kale ee ka qayb qaata jannada. Fekerka ayaa go'aamiya waxa la qabanayo, iyo habka loo qabto. Hase yeeshe fikirka farxad leh waxaa loo isticmaali karaa samaynta dhismaha jannada. Dareenadu waxay geli karaan jannada muraayadda oo kaliya si ay u noqdaan kuwo lagama maarmaanka u ah farxadda fikradda. Hase yeeshee, dareemada loo adeegsanayo waxay ka mid yihiin dabeecad ka sii fiican oo ka duwan dareenka nolosha ee nolosha, waxayna ku shaqeyn karaan oo kaliya marka ay isku dhacaan si aan haboonayn caqliga samada. Dareenka ama dareemaha ka welwelsan jidhka ma laha qayb ama meel jannada. Markaa dareenka noocee ah ayaa ah dareenka jannada? Waxay yihiin dareeno ay sameeyeen maanka ku meelgaar ahaan iyo munaasabada, oo aysan joogsan.
Inkasta oo dhulka aan la arki karin ama aan la dareemin sida ay dhulka ku jirto, haddana dhulka ayaa laga yaabaa inuu yahay iyo waxa la dareemo maskaxda marka fikradaha maskaxdaasi ay leeyihiin, sii kordhinta xulasho, ayaa ka walaacsan dhulka. Hase yeeshee dhulka jannada ku jiraa waa dhul wanagsan oo aan laga fikirin maskaxda xaaladdiisa jireed ee dhabta ah iyada oo ay ku dheehan tahay mashaakilaad ay ku dheehan tahay jirka. Haddii fekerka qofku ka walaacsan yahay samaynta iyo qurxinta dhulalka dhulka, iyada oo la wanaajinayo xaaladaha dabiiciga ah ee dhulka iyo iyaga oo ka dhigaya inay faa'iido u yeeshaan naftiisa iyo kuwa kale, ama hagaajinta jirka, Dhaqanka iyo maskaxda si kastaba ha ahaatee, ka dibna dhulka ama meelaha dhulka ee uu ka welwelsanaa naftiisa, wuxuu jeclaan lahaa, in jannada, lagu ogaanayo dhammaystirka ugu weyn, fekerkiisa, oo aan lahayn caqabadaha iyo caqabadaha waxay ku tartamayeen nolasha jirka. Fikradda waxay qaadataa meesha uu ku dhegsan yahay qiyaasta qiyaasta iyo masaafada udhaxaysa fikirka. Sida laga soo xigtay fikradiisa uu ku faani karo dhulka iyo dhulka, sidaas oo kale waxa uu noqon doonaa sida ay samada u samayso; laakiin aan lahayn foosha shaqada iyo iyada oo aan loo eegin dadaalka fekerka, sababtoo ah fekerka keenaya helitaanka xaqiiqada waxaa lagu sameeyaa dhulka oo keligiis wuxuu ku nool yahay jannada. Fikirka jannada ku jira waa raaxeysiga iyo natiijada fekerka lagu sameeyey dhulka.
Maskaxdu werwer kuma lahan mawduuca miisaaniyadda haddii mowduuca uu la xidhiidhay heerkeedii ugu wanaagsanaa dhulka iyo in la tixgeliyo dano gaar ah. Khabiir ka mid ah fikirka ku saabsan dhulka oo uu ka walaacsan yahay gaari gaara ama qalab lumis ah oo loogu talagalay inuu lacag ka samaysto abuuritaankiisa, wuxuu jeclaan lahaa, haddii uu ku soo galo cirka, wuu iloobey, oo uusan gebi ahaanba ka warqabin hawshiisa dhulka. Marka la eego kantaroole, oo ujeeddadiisu ahayd inuu ku-habboonaado gaadiidka noocaas ah ama qalab loogu talagalay ujeedada hagaajinta xaaladaha dadwaynaha ama si loo yareeyo shaqsiyaadka dhibaatooyinka, ujeeddo bani'aadamnimo, iyo xitaa haddii uu u malaynayo inuu yahay samaynta iyo ku-naqshadaynta sheyga leh sheyga muujinaya qaar ka mid ah hindise-xumada- illaa inta uu fikirkiisa ahaa madax la'aan ama talaabo talaabo ah in lacag lagu sameeyo - shaqadu waxay u maleyneysaa inay qayb ka yeelan doonto samada jilayaasha iyo in uu halkaas ku dhammaystiri lahaa si buuxda waxa uu aysan awoodin in ay dhulka ku fahmaan.
Dhaqdhaqaaqa ama safarka maskaxda ee adduunka jiilkiisa kuma samee socod lugo leh ama dabaasha ama duulaya, laakiin waxaa loo maleynayaa. Fikradda waa habka ay maskaxdu ka dhaafto hal meel oo kale. Fikraddan ayaa laga yaabaa inay taasi tani ku dhacdo nolosha jireed. Nin waxaa laga yaabaa in loo gudbiyo fikirka ah meelaha ugu fog dhulka. Jidhkiisa jidhkiisu wuxuu ku jiraa halka uu joogo, laakiin fekerkiisu wuxuu u socdaa halka uu doono iyo si dhaqso ah oo feker ah. Way fududahay in uu naftiisa u gudbiyo fikradda ka timid New York ilaa Hong Kong, maadaama uu ka yimid New York ilaa Albany, oo aan waqti loo baahnayn. Nin oo fadhiya kursigiisa ayaa laga yaabaa inuu ka maqnaado fikrado isla markaana dib u eegayo meelo fog oo uu ku noolyahay oo uu ku noolaan karo mar labaad dhacdooyinka muhiimka ah ee la soo dhaafay. Dhidibku wuxuu kuusoo jeedaa foolxumo foolxumadiisa sida uu u shaqeeyo murqaha weyn ee murqaha. Wajigiisa waxaa laga yaabaa in uu kuusoo daro midabkiisa, isaga oo dib u soo laabtay, wuxuu soo celiyaa qaar ka mid ah shakhsiyaadka gaarka ah, ama wuxuu u jeedsan karaa miisaan ciriiri ah marka uu ka gudbo khatar weyn, iyo waliba inta uusan ogeyn jirka iyo agagaarkiisa haddii aan la joojin oo la xusuusto, ama ilaa uu ka fikiro jirkiisa jirka ee kursiga.
Sida ninku u dhaqmi karo oo uu dib-u-fekerayo fikradaha waxa uu soo maray jidhka jidhkiisa isagoo aan ogeyn jirkiisa jirkiisa, maskaxda, sidoo kale wuxuu u dhaqmi karaa oo dib u noolaan karaa si cirka ah sida samooyinka iyo fekerka ugu wanaagsan halka dhulka. Laakiin fekerka ayaa markaa ka dib laga saarayaa dhammaan wixii fekerka ka horjoogsanaya inuu yahay mid ku faraxsan. Jidhku u isticmaalo maskaxda si uu u dareemo nolosha dunida waa jirka jirka; jidhka loo isticmaalo maskaxda si uu u dareemo farxadkiisa jannada ku jirta waa fikirkiisa. Jirka jidhku wuxuu ku habboon yahay nolosha iyo ficilka aduunka ee jir ahaaneed. Muuqaalkan fikirka ah waxaa abuuray maskaxda inta lagu jiro nolosha oo uu qaato qaab dhimasho kadib oo aan sii dheereynin mudada samada. Muuqaalkan fikirkan maskaxda ayaa ku noolaan doona inta samada ku jirta. Fikirka maskaxda waxaa loo adeegsadaa maskaxda si uu ugu noolaado dunida jannada, sababtoo ah dunidu jannada waxay ka mid tahay dabeecadda fikirka, oo laga sameeyay fikradda, iyo fikirka jidhku u dhaqmo sida dabiiciga ah ee dunida jannadiisa sida jirka jidhka ee jirka dunida. Jirka jirku wuxuu u baahan yahay cunto, in lagu hayo aduunka jir ahaaneed. Maskaxduna sidoo kale waxay ubaahan tahay cunto si ay u ilaaliso jirkeeda fikirka ah ee dunida jannada, laakiin cuntada ma noqon karto jir ahaan. Cuntada waxaa loo isticmaalaa fekerka, waana fekerka lagu riyaaqay markii maskaxdu ku jirtey jirka markaad dhulka joogto. Inkastoo ninku uu wax akhriyaya oo fekerayay oo ku fiicnaaday shaqadiisii ​​markii uu dhulka joogey, siduu sidaas sameeyay, wuxuu diyaariyey cuntada jannada. Shaqada jannada iyo fikirka waa nooca kaliya ee cuntada ee maskaxda ku jirta dunida janno ee uu isticmaali karo.
Maskaxda ayaa laga yaabaa in ay fahamto hadalka iyo muusiga samada, laakiin kaliya iyada oo loo maleynayo. Heesta noloshu waxay la socotaa muusikada dhinacyada. Laakiin gabaygu wuxuu ka kooban yahay fikradiisa gaarka ah iyo sida ay udub dhexaad u yihiin dhulka. Muusiggu wuxuu ka imanayaa xuduudaha jannada ee dunidoo kale, maaddaama ay ku wada nool yihiin.
Maskaxdu ma taabto maskaxaha kale ama sheyga jannada, sida waxyaabaha jirku la xiriiraan jirayaasha kale ee jidhka. Jannada dhexdeeda jidhka maskaxda, taas oo ah jirka maskaxda, waxay taabataa jirro kale oo fikirka ah. Mid ka mid ah oo og in taabashada xiriirka kaliya ee jidhka leh wax kale ama taabashada hilibka jidhka, ma qadarin doono farxadda taas oo laga yaabo in laga yaabo in maskaxda laga yiraahdo taabashada fikradda. Baaskiilku waa la fuliyaa, ku dhawaad, taabashada fekerka fikradda. Baaskiilka marnaba lama ogaan karo taabashada hilibka jirka. Jannada maahan meel lafdhab u ah ama gobolka oo maskax kasta oo lagu xakumo jahwareer la'aanta jannada. Hermits, qallafsanaan la'aanta iyo metaphysicians kuwaas oo fikradoodu ay ka welwelsan yihiin in ay si gaar ah u tixgeliyaan naftooda si gaar ah ama dhibaatooyin aan la taaban karin, laga yaabee inay ku raaxaystaan ​​samooyinkooda, hase yeeshee way yar tahay in maskaxdu awood u yeelan karto ama ka saari karto dhammaanba jirooyinka ama maskaxda kale ee dunidiisa.
Cirka oo ah nin ku noolaanaya geerida kadib wuxuu ku jiraa jawiga nafsadeed ee qofka. Tani waxa uu ku wareegsanaa, waxaana ku noolaa inta uu noolyahay. Dadku miyir maaha jawiga maskaxeed, laakiin waxay noqdaan kuwo miyir beeliya dhimashada ka dib, ka dibna aysan ahayn jawi, laakiin sida jannada. Waa inuu marka hore soo dhex maraa, ka soo baxaa, jawiga nafsadda ah, taas oo ah, ka gudba jahannamada, ka hor inta uusan geli jannada. Inta lagu jiro nolosha jirka, fikradaha samaynta jannada ka dib geeridu waxay ku jirtaa jawiga maskaxeed. Waxay yihiin, inta badan, aan ku noolayn. Jannadiisa wuxuu ka kooban yahay horumar, ku-noolaansho iyo xaqiiqda fikradaha ku habboon; laakiin wakhti kasta, waa la xusuustaa, wuxuu ku jiraa jawigiisa. Meel ka baxan jawigan ayaa la gashadaa jeermiska kaas oo jidhkiisa soo socda la dhisay.
Maskax kastaa wuxu ku nool yahay jannada gaar ahaaneed, madaama maskaxdiisa ay ku noolaato jirkeeda iyo asxaabtiisa gaarka ah ee adduunka. Dhammaan maskaxaha samooyinkooda waxay ku jiraan duni weyn ee jannada, sida ragga ay ku jiraan gudaha adduunka. Maskaxdu maaha meel ku taal jannada sida ragga ay u joogaan iyo meel dhulka ku yaal, laakiin maskaxdu waxay ku jirtaa gobolka taas oo ah fikraddiisa iyo tayada fikirkiisa. Maskaxda ayaa laga yaabaa in ay isku xidho jannada dhexdeeda gudaheeda caalamiga ah ee weyn, oo aan la taaban karin maskaxaha kale ee tayada ama awoodda, sida mid ka mid ah nin oo iska xirtaa adduunka marka uu isaga ka maqan yahay bulshada oo dhan. Maskax kastaa wuxuu ka qaybqaadan karaa jihada kale ee maskaxda ama dhammaan maskaxaha kale ilaa heerkoodu ujeedooyinkooda ay isku mid yihiin iyo heerka ay fikradoodu ay ku jiraan, sida ragga ah ee dhulka ee isirrada xajka ah ee la isku keeno oo ay ku raaxaystaan ​​ururada maskaxda iyada oo loo maleynayo.
Dunida jannada ayaa la dhisay waxayna ka sameysmeen feker, laakiin fikradahaas oo keliya ayaa ka qayb qaadanaya farxad. Fikradaha noocan oo kale ah: isagu wuu i xaday, wuu i dili lahaa, wuu i xishoodi lahaa, wuu been iigu beeniyay, ama, waxaan ka masayray, waan ka xishoodayaa, waan necbahay, ma ciyaari karo qeyb ka mid ah jannada. Waa inaan loo malayn in cirku yahay meel caajis ah ama dawlad sababtoo ah waxay ka kooban tahay waxyaabo aan la hubin oo aan shaki lahayn sida fekerka qof. Dadku waa runtii madaxbannaanida dhulka, inkasta oo ay tahay, waxay ku imanaysaa fikirkiisa. Lacagta boqorrada ee dunidu ma helayaan farxad mooyaane oo dahab ah, laakiin waxay u maleynayaan inay haystaan ​​hantidooda, iyo awooddooda. Haweeneydu ma helin qiyaasteeda nasiib daro ee farxad ka timid qaybo badan oo ka mid ah finanka oo loo isticmaalo dharka marada iyo xidhashada dharka, laakiin farxadkeeda waxay ka timaadaa fekerka ah in ay qurxiso iyada iyo fekerka waxay amar ku bixisaa dadka kale. Farshaxanka Farshaxanku kuma jiro wax soo saarka shaqadiisa. Waa fikradda ka dambeysa in uu ku raaxeysto. Macallinku si fiican uguma faraxsan yahay xaqiiqda ah in ardayda ay awoodaan inay xasuusiyaan qaababka adag. Ku qanacsanaantiisa ayaa ku jirta fikradda ah inay fahmayaan oo ay adeegsan doonaan waxa ay ku calaamadiyeen. Nasiib wanaag yar oo ninku ku dhaco dhulka, wuxuu ku fekeraa fikradiisa oo kaliya, oo ma aha mid ka mid ah hanti ahaan ama guul. Fikradaha dunidu waxay u muuqdaan kuwo aan la taaban karin oo aan macquul ahayn, iyo hantidu waxay u muuqdaan kuwo dhab ah. Jannada dhexdeeda waxa sheyga dareenka ah la waayay, laakiin fikradaha waa run. Maqnaanshaha foomamka dareenka guud iyo joogitaanka iyo dhabta ah ee maadooyinka fekerka, maskaxdu waa mid aan aad u faraxsaneyn marka loo eego maskaxda qofka caadiga ah iyada oo la dareemayo dareenkiisa inta uu dhulka ku jiro.
Dhammaan kuwa ku soo galay fikradayada inta lagu jiro dhulka, ama kuwa aan u malaynayno in loo hoggaansamayo helitaanka qaar ka mid ah fekerka, ayaa la filayaa in ay joogaan oo ay gacan ka geystaan ​​sameynta jannada. Sidaas daraadeed asxaabtiisu ma xiri karaan jannada. Cilaaqaadka waxaa laga yaabaa inay sii socoto maskaxda caalamka, laakiin kaliya haddii xiriirku yahay dabeecad fiican oo aan ahayn ilaa hadda waa jidh ahaan iyo jidh ahaan. Jidhku ma laha qayb ka mid ah jannada. Ma jirto fikradda galmada ama tallaabada jinsiga ee jannada. Qaar ka mid ah maskaxyada marka ay ku jiran jirro jireed, waxay u muuqdaan inay isku darsadaan fikradda ah "nink" ama "xaas" oo leh fal-celin shucuur ah, waxaana laga yaabaa inay ku adagtahay kuwa caynkaas ah ee ka fikiraya ninka iyo xaaskiisa iyaga oo aan u maleynaynin xiriirkooda jidheed. Ma aha wax adag in dadka kale ay u maleynayaan in ay ninka ama naagtu u maleynayaan inay yihiin saaxiibo ku hawlan hirgelinta habdhaqameed caadi ah ama mawduuc aan naxariis laheyn iyo jacayl aan caadi ahayn. Marka maskaxda qalafsani ay ka soo jiidato jirkeeda jireed iyo gashay adduunka jannada, sidoo kale, sidoo kale, ma lahaan doono fikirka jinsi sababtoo ah waxay ka qayb qaadan doonaan jidhkeeda jidhka ah iyo rabitaankooda dareenka leh oo laga nadiifin doono guud ahaan rabitaan.
Hooyo u muuqata in ay dhimatay ilmaheeda ayaa waxay mar kale la kulmi kartaa jannada, laakiin sida jannadu ka duwan tahay dhulka, sidaas hooyada iyo ilmuhu way ka duwanaan doonaan jannada ka jira waxa ay ku jireen dhulka. Hooyo u aragtay ilmaheeda dano gaar ah, oo u tixgelisay in ilmuhu yahay hanti gaar ahaaneed, ma rabto ilmo sidan oo kale ah, ama ay ku hayso iyada jannada, sababtoo ah caqli-galsashada noocaan oo kale ah ayaa leh shisheeye waana laga saaray jannada. Hooyada uurka leh ee jannada ku jirta waxay uuraysataa fikrad ka duwan maskaxdeeda oo ay u maleynayso in ay ujeedadu tahay, marka laga reebo hooyada iska leh waxay u dhalataa ilmaheeda jireed, iyada oo ku jirta adduunka jireed. Fikradaha fikirka ah ee hooyada niyadjabka leh waa jacayl, caawimaad iyo ilaalin. Fikradaha noocan oo kale ah looma burburin mana dhimanin dhimasho, hooyadana fekerkaas oo kale u samaysay ilmaheeda inta ay dhulka ku sii jiri doonto waxay ku sii jiri doonaan jannada.
Ma jiro qof bini'aadam ah oo ku xaddidan ama aan ku xirnayn jirka jirkiisa iyo maskax kasta oo bini'aadamka ah wuxuu leeyahay aabahiisa jannada. Maskaxdaas oo ka tagtay noloshii dhulka iyo samada samadeeda, iyo fikradoodii ugu fiicneyd ee loogu talagalay ama ay ka walaacsan yihiin kuwa ay garanayeen dhulka, waxay saameyn kartaa maskaxda kuwa dhulka ku leh haddii maskaxyadu ay ku gaaraan heer sare oo feker ah.
Fikradda ilmo ee hooyada u samaysay iyada jannada dhexdeeda ma aha qaabkeeda iyo cabbirka. Nolosha jireed waxay u aqoonsatay ilmaheeda sida ilmo, sida ilmo iskuulka, kadibna laga yaabo inuu noqdo aabe ama hooyo. Dhamaan xirfadaha jirka ee jirka oo dhan ayaa fikrad fiican u leh ilmaheeda aan isbeddelin. Jannada dhexdeeda, fekerka hooyada ee ilmaheeda kama mid aha jidhkeeda. Fikirkeeda ayaa ah midka ugu fiican.
Mid waliba wuxuu la kulmi doonaa asxaabtiisa jannada si uu u ogaado asxaabtiisa. Dhulka adduunka waxaa laga yaabaa in uu leeyahay irbad ama ilbiriin, bamka ama sanka dhalada, afka oo kale sida cherry ama khudbadi, saxan ama qaanad jumlad ah, madax madaxa jeexan ama madaxa sida roog, wajiga sida xabbad ama kabadho. Foomkani waxa uu noqon karaa kuwa kale sida Abollo ama ciriir. Kuwani badanaa waxay isku dhejiyaan iyo maaskaro ay saaxibadoodu dhulka kudhacaan. Laakiin kumbuyuutarradaasi waa la xiri doonaa haddii uu garanayo saaxiibkiisa. Haddii uu arko asxaabtiisii ​​oo ay ku dhuuntaan dhulka, wuxuu ogaan doonaa isaga oo ku jira jannada jaah-wareer la'aan.
Maaha macquul in la filayo in aan aragno ama ku jirno waxyaabaha samada ku jira sida aan ku hayno dhulka, ama inaan dareemno in samada aan la rabin haddii aynaan awoodin. Nimanku marwalba way arkayaan sida ay yihiin, laakiin sida uu u malaynayo inay yihiin. Ma fahmin qiimaha hantidiisa. Waxyaabaha sida naftooda ah waa kuwo ka mid ah dhulka waxaana laga dareemayaa xubnaha jidheed ee dareenka. Fikradaha kaliya ee shayadani waa loo qaadi karaa jannada, fikradahaas oo keliya ayaa geli kara samada si ay uga qaybqaataan farxada maanka. Sidaa darteed maskaxda isku mid ah oo uu ahaa kii fekerka ah ee jirka ku yaal dhulka kuma jiri doono wax khasaare ah iyada oo la bixinayo wixii aan waxba ku kordhin karin farxadiisa. Kuwii aan jeclaynay dhulka, iyo jacaylka aan u baahannahay farxadeena, ma jiri doonto sababtoo ah khaladaadkooda iyo khiyaamooyinkooda looma qabsanaynin xagga fikirka jannada. Waxaan si dhab ah uga mahadcelin doonaa iyaga markaan awood u leenahay iyaga oo aan khaladkooda iyo sida aan uga fikirno iyaga oo ah fikrad. Ciladaheena saaxiibadood waxay la kulmaan khaladaadahayaga dhulka, iyo farxadda saaxiibtinimada waa la jabsaday waana la daalay. Hase yeeshee, saaxiibtinimada aan lahayn curyaanku si fiican ayaa looga dhex helaa dunida jannada, waxaanan ogaannaa iyaga si ka sii badan marka ay ka muuqanayaan marka la eego dhulka daciifka ah.
Maaha wax aan macquul aheyn in maskaxda jannada ay la xiriirto mid ka mid ah dhulka, ama in dhulka in ay la xiriiraan mid ka mid ah jannada. Laakiin isgaadhsiinta noocaas ah lama qaadin iyadoo loo marayo dabeecad maskaxeed, mana ka soo baxdo ilaha dhirta iyo neefta ay ka hadlaan "adduunka ruuxa" ama "xagaaga". Maskaxda jannada ma aha "jinni" oo ka mid ah ruuxa hadlaya. Dunida maskaxda ee maskaxda maaha adduunka ruuxa ama xagaaga ee ruuxa. Maskaxda ku jirta jannada ma geli karto mana ku hadli karto xagaaga, mana maskaxda ku haynin jannada dhexdeeda oo u muuqata wax kasta oo cajiib ah ee jiheeyaha ama saaxiibadiisa dhulka. Haddii maskaxda ku jirta jiilka gashay xagaaga ama ay u muuqatay in uu yahay ruux qiiro leh ama u muuqday qaab muuqaal ah oo gacmaha isdhaafsaday oo la hadla saaxiibbadiis jidh ahaaneed, markaa maskaxdaasi waa inay ka warqabtaa dhulka, iyo jidhka iyo dhibaatooyinka, dhibaatooyinka ama cilladaha kuwa ay la soo xiriiraan, iyo kala soocidda kuwani waxay kala jari doonaan oo ay dhibayaan farxadiisa iyo samada oo dhammaadka maskaxdan. In kastoo maskaxdu ay jannada ku jirto, farxad la'aantiisana lama joojin doono; ma ogaan doono mid ka mid ah khiyaamada ama khaladaadka ama dhibaatooyinka kuwa dhulka ku jira, oo kama tegi doono samooyinkeeda ilaa muddadii samada ay dhammaato.
Maskaxda jannada waxay la xiriiri kartaa mid ka mid ah dhulka iyadoo la moodayo fikirka iyo fekerka oo keliya iyo fekerka iyo isgaadhsiintu waxay had iyo jeer ahaan doonaan midka ugu fiican iyo wanaagga, laakiin marnaba ha ku sheegin mid ka mid ah dhulka ku saabsan sida loo kasbado nolol, ama sida loo buuxiyo rabitaankiisa ama si ay u siiyaan raaxada kaliya ee saaxiibtinimo. Marka maskaxda jannada ku jirta ay la xiriirto mid ka mid ah dhulka, waxa badanaa laga helaa fikradaha aan qarsooneyn ee soo jeedinaya ficillo wanaagsan. Waxa suurtagal ah, inay suurtagal tahay, in soo jeedinta laga yaabo inay la socoto fikirka saaxiibka ah ee jannada ku jira, haddii la soo jeediyay uu xidhiidh la leeyahay dabeecada ama waxa uu ahaa shaqadiisa dhulka. Marka fikradda mid ka mid ah jannada waxaa lagu qabtaa maanka maskaxda dhulka, fikradda loola jeedo in loola jeedo wax kasta oo astaamo ah. Isgaadhsiintu waxay ahaan doontaa fikirka kali ah. Waqtiyada jimicsiga iyo shuruudaha ku habboon, ninku wuxuu ku faafi karaa fikirkiisa mid ka mid ah jannada. Hase yeeshee, fikraddaasi ma lahaan karto boodh kale oo dunida ah, waana inay ahaataa mid waafaqsan fekerka, oo la xiriirta farxadda maanka ee jannada, oo aan xidhiidh la lahayn shakhsiyadda qofka dhintay. Marka wada xidhiidhka u dhexeeya maskaxda iyo maskaxda dhulka lagu hayo, maskaxda jannada kuma fekerayso mid kale oo dhulka ku jira, mana ninna dhulka ku fekerin midka kale ee jannada. Isgaadhsiintu waxay yeelan kartaa oo kaliya marka maskaxdu isku taxalujiyaan midba midka kale, marka meel, booska, hantida, ma saameynayo fekerka iyo marka fikirku maskaxda ku hayo. Taas oo ah qofka caadiga ah uusan uur qaadin. Haddii wadaagaani la qabto, waqti iyo meel ma muuqdaan. Marka wadaxaajoodka noocaas ah lagu hayo maskaxda jannada kuma dhaco dhulka, mana ninna kor ugu soo baxo jannada. Isku xirka noocan oo kale ah ee fikradda waa iyada oo maskaxda sare ee mid ka mid ah dhulka.
Sababtoo ah farqiga ujeedooyinka iyo tayada ama awooda fikradaha iyo rabitaanka ragga, jannada ma aha mid la mid ah kuwa ku soo socda. Mid kastaaba wuu geli karaa oo wuu arkayaa oo wuxuu ku qanacsan yahay sida buuxda wixii uu rabay farxadiisa. Farqiga fekerka iyo fikradaha ragga ayaa waxay kicinayaan matxafyada tirinta iyo qiimaynta ee samooyinka kala duwan ee ragga ah ee ku raaxaysta geerida kadib.
Waxaa jira samooyin badan sida maanka. Hase yeeshee, dhammaantood waxay ku dhex jiraan hal jannada. Nolosha kasta ee jannada ku jira ee farxad la'aan iyada oo aan wax faragelin ku ah farxad kuwa kale. Waxaa farxad laga yaabaa in, haddii la qiyaaso, wakhtiga iyo marka la eego waayo-aragnimada dhulka, waxay u egtahay inay u egtahay daa'in weligeed ah. Xaaladaha dhabta ah ee dhulka waxaa laga yaabaa inay aad u gaaban tahay. Xagga jannada dhexdeeda mudadaasi waxay noqon doontaa daa'in, taas oo ah wareegsan dhamaystiran ee khibrad ama fikrado. Laakiin wakhtigu wuu dhammaanayaa, inkasta oo aan dhammaadka u muuqan doonin mid ka mid ah jannada in uu noqdo dhammaadka farxadkiisa. Bilowgii samada uma muuqan mid lama filaan ah ama lama filaan ah. Dhamaan oo samada jilbaha isa saaraan, waxay micnahoodu tahay dhammeystirka ama dhammaystirka, oo aan ku dhicin wax aan ka qoomameyneynin sida erayadan lagu fahmo dhulka.
Xilliga samada sida lagu go'aamiyay fikradaha ku habboon iyo shaqada ka hor dhimashada ma ahan mid dheer ama gaaban, laakiin waa dhamaystiray oo dhammaatay marka maskaxdu ay ka nasto shaqadeeda oo ay daalanaato oo ay la socoto fikradaha ku haboon oo aan la fahmin dhulka, oo laga soo qaaday garabkan waxaa lagu xoojiyaa oo lagu qaboojiyaa iyadoo la niyadjabiyo oo illoobo xanuunka iyo welwelka iyo dhibaatooyinka ay ka dhaxashay dhulka. Laakiin dunidu mugdiga kuma fekerayso aqoonta dheeraadka ah ee ka jirta dhulka. Dunida waa goobaha dagaalka ee isku-dhafka iyo iskuulada ay aqoonta u leedahay, iyo dhulka waa inay maskaxda ku laabtaan si ay u dhamaystiraan tababarkooda iyo waxbarashadooda.
Tifaftiraha arrintaa Janaayo wuxuu noqon doonaa Jannada oo ku yaal Dunida.